Success Entrepreneurs - စွန့်ဦးတီထွင် အောင်မြင်မှု
မြန်မာ့အနာဂတ်စီးပွားရေးတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ စီးပွားရေးလိုအပ်လာမှုတွေကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ စွန့်ဦးတီထွင် လူငယ်တွေ၊ လက်ရှိ SMEs တွေရဲ့ မဟာဗျူဟာမြောက် စီးပွားရေးဦးဆောင်မှုတွေနဲ့အတူ အခွင့်အလမ်းအသစ်တွေမှာ အောင်မြင်တဲ့နေ ရာတွေကို လက်ဦးရယူထားနိုင်ဖို့ဟာ လွန်စွာအရေးကြီးလှပါတယ်။
ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်လာတာနဲ့အတူ Challenging တွေဟာ မြင့်လာတာမို့ မိမိရဲ့ Skill နဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲရပ်တည်နိုင်ရင်တော့ ဘယ်ခေတ်မှာပဲနေနေ အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုအတွက် Entrepreneurship လုပ်ငန်းများအတွက် လက်ရှိ လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်အသင်း MYEA ရဲ့ ဥက္ကဌ ဦးဝေဖြိုးမှ သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတချို့ကို မျှဝေခဲ့ဘူးပါတယ်။ စွန့်ဦးတီထွင်သူ တစ်ယောက် အနေနဲ့ မအောင်မြင်မှီမှာ အရေးကြီးတဲ့ အချက် (၆-ချက်) ကို သတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၁) စီးပွားရေးအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင် Idea က အရေးကြီးပါတယ်၊ အဲ့ဒီ Idea ကလည်း ဈေးကွက်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိဆိုတာကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီးမှ စတင်တာဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
(၂) အဲ့ဒီ Idea ကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးမဲ့ မိမိရဲ့ Team ဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင် စက်တွေ၊ ငွေတွေ ထက်စာရင် မိမိရဲ့အသင်းအဖွဲ့ရဲ့အားကောင်းမှုဟာ အလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်။
(၃) ဈေးကွက်မစတင်မှီမှာ Product & Price ကို သေချာစွာ ဒီဇိုင်းလုပ်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ ဈေးနည်းတာပဲဖြစ်စေ၊ ဈေးများသွားတာပဲဖြစ်စေ လက်တွေ့ဈေးကွက်မှာ အခက်အခဲတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
(၄) အရေးအကြီးဆုံးကတော့ Financing ပါ၊ လက်ငန်းစလုပ်တဲ့အခါ လုပ်ငန်းမိတ်ဆွေအဆက်အသွယ်၊ လုပ်ငန်းရဲ့ အမြတ်၊ ပံ့ပိုးပေးမှုတွေမရှိသေးချိန် ငွေကြေးအခက်အခဲကြုံလာရင်လည်း ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးလှပါတယ်။
(၅) နောက်တချက်က Market ဈေးကွက်ပါ၊ ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်လာတာနဲ့အတူ ဈေးကွက်မှာနေရာယူနိုင်ဖို့ကလည်း အဓိကကြပါတယ်၊ မိမိရဲ့ Customer ကို အာရုံစိုက်ပြီး ဈေးကွက်ကိုအလိုက်သင့်လုပ်နိုင်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
(၆) နောက်ဆုံး-အရေးကြီးဆုံးကတော့ Cash Flow ကို စီမံတက်ဖို့ပါ၊ ၀င်ငွေ-ထွက်ငွေတွေကို သေချာချိန်ဖို့လိုပါတယ်။ Paper ပေါ်မှာ မြတ်နေပြီး၊ လက်ဝယ်မှာ မမြတ်တာတွေမဖြစ်ဖို့လည်း သေချာဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ လုပ်ငန်းထဲ Cash ပျက်သွားရင် အလုပ်တွေအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်လာနိုင်လို့ ဒီအချက်ကိုလည်း စီမံနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
စွန့်ဦးတီထွင်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုပ်ငန်းအသစ်စတင်လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် FAQ မှာ မေးခွန်းတချို့နဲ့ အဖြေတွေကို အကြံပြုဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ယခုဖော်ပြချက်တွေနဲ့ FAQ အချက်တွေကို ရှိရင်းစွဲ မိမိရဲ့ အသိပညာ၊ အဆက်အသွယ်၊ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ထပ်မံပေါင်းစပ်ပြီး လုပ်ငန်းကိုစတင်ဖို့ အကောင်းဆုံးသော အင်အားတွေဖြစ်လာနိုင်ပါစေ။ လူတိုင်းမှာ မတူညီတဲ့ Talent, Idea, Creation တွေရှိပါတယ်၊ ဒီအရာတွေကို မိမိနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အခွင့်အလမ်းအသစ်တွေကို ရှာဖွေဖန်တီးပြီး စွန့်စားလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အောင်မြင်သော စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်လာစေဖို့ အားပေးရေးသားလျှက်…
(Mission ရည်ရွယ်ချက်၊ Money ငွေကြေးရှာဖွေမှု၊ Man လူမှုဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး၊ Market ဈေးကွက်ရှာဖွေမှု၊ Method နည်းစနစ်မဟာဗျူဟာ) စတဲ့ လုပ်ငန်း၏ အဓိကအခြေခံအချက် (5-M) အကြောင်းမျှဝေပေးမည့် စွန့်ဦးတီထွင်အောင်မြင်သူတို့၏ အင်တာဗျ... More
2017 ဟာ စွန့်ဦးတီထွင်မှုအတွက် အခွင့်အရေးနှစ်ဖြစ်လာပါပြီ ??? How to Entrepreneurship ဘယ်လိုစွန့်ဦးတီထွင် အောင်မြင်နိုင်မလဲ…
2017 ဟာ စွန့်ဦးတီထွင်မှုအတွက် အခွင့်အရေးနှစ်ဖြစ်လာပါပြီ ???
How to Entrepreneurship ဘယ်လိုစွန့်ဦးတီထွင် အောင်မြင်နိုင်မလဲ…
ကမ္ဘာကျော် စွန့်ဦးတီထွင်မှု ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့…
Entrepreneur is livingafew year of your life like most people won... More
ဖောက်သည်များကို မပြောအပ်သော စကားများ
၁။ ။မင်းဘာကြောင့် သူ့အတွတ်အလုပ်ပေးရတာလဲ
ကုန်မာစတိုးက ဆိုင်ရှင်ရဲ့လေသံမျိုးပေါ့၊ ပေါ့ပျက်ပျက် ပြောလိုက်တယ်ဆိုတဲ့တိုင်အောင် ဝယ်သူအတွက် နားခါးစေသလို၊ မိမိအတွက်လည်း တာဝန်မဲ့ရာ ရောက်ပါတယ်။ ဒီအပြောမျိုး... More
One Minute Entrepreneur တစ်မိနစ် စွန့်ဦးတည်ထွင်လုပ်ငန်းရှင်
သင်ကြားရ၊ ဖတ်ရ သင်ယူခဲ့ရဖူးတဲ့ အသိပညာဗဟုသုတတွေကို မှတ်တမ်းရေးထားပါ။ အဲဒီမှတ်တမ်းထဲက ကောင်းတဲ့၊ အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကို စိစစ်ထုတ်ယူပြီး “တစ်မိနစ် သိမြင်နားလည်မှု”အဖြစ် ပြောင်းလဲမှတ်သားပါ။
မနေ့ကနယ်က မိတ်ဆွေတယောက် နဲ့ SME ၇ုံး ကို သွားSME ချေးငွေတွေအကြောင်းမေးကြည့်တာပါ SME ရုံးကတော့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်မှာပါ CB bank မှာလဲမေးခဲ့ပါတယ် SME ချေးငွေဆွေးနွေးပေးဖို့ သီးသန့်ရုံးခန်းကို ဗိုလ်ရွဲလမ်းအောက်ဘလောက်မှာဖွင့်ထားပါတယ် သိရသလောက် အကြမ်းဖျင်းပြောရရင် ချေးငွေရရှိရန်လိုအပ်ချက်တွေက... More
Banking Ratio ဘဏ်၏ အကျိုးအမြတ်ကို တွက်ချက်ရန် အချိုး (၆) ခု
1) အတိုးနှုန်းပေါ်အမြတ် (Interest Margin)
2) အသားတင်အကျိုးအမြတ် (Net Margin)
3) ပိုင်ဆိုင်ငွေကြေးအကျိုးရှိစွာအသုံးပြုမှု (Assets Utilization)
4) ပိုင်ဆိုင်မှုငွေကြေးပစ္စည်းများပေါ်အမြတ်(Return on Assets)
5) အမြတ်ဆပွားနှုန်း (Leverage Multiplier) 6) ရင်... More